ခက်မာ: သန်းနှင့်လူ 1. 2.
ဒီနေ့ နေ့လည်၂နာရီလောက်မှာရောက်လာသောအီးမေးတစ်စောင်ကြောင့် ကျွန်မမှာပြုံးရမလိုမဲ့ရမလိုဖြစ်
သွားခဲ့ရသည်။ သားတို့ကျောင်းမှအီးမေးလ်ဖြစ်သည်။“Grade 4နှင့်Grade5မှကျောင်းသား၃ဦး၏ခေါင်း တွင်သန်းဥတချို့တွေ့ရှိပါသည်။ သင့်ကလေးအိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ကလေးခေါင်းကိုစစ်
ဆေးပါ။ကလေးခေါင်းကို တစ်ပါတ်လျှင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍သင့်ကလေး
ခေါင်းတွင် သန်း(သို့)သန်းဥတွေ့ရှိပါက ကျောင်းသို့ချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပါ။ သန်းရှိသူကိုအ မြန်ဆုံးရှာဖွေဖော်ထုတ်၍သန်းများကိုအမြစ်ပြတ်နှိမ်နင်းရန်မှာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။”ဟု
ရေးထားသည်။သားနှစ်ယောက်ကျောင်းမှပြန်ရောက်လာချိန်မှာသားတို့အားအီးမေးလ်ကိုပြတော့မြန်မာပြည်မှရောက်လာတာတစ်နှစ်ကျော်ရုံသာရှိသေးသောသားနှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်မလိုပင်ပြုံးကြသည်။“သူတို့ ဆီမှာလူ့ခေါင်းထဲသန်းတွေ့ တာကငါတို့ ဆီမှာရွာထဲကျားဝင်တဲ့အတိုင်းပဲ“ ဟုကျွန်မက ရေရွတ်မိသေးသည်။
ညနေစောင်းတော့ကျွန်မတို့ပရိုဂရမ်တွင်လေးလတာResidencyနေဖို့ရောက်လာသည့်ဗင်နီဇွဲလားမှ စာရေးဆရာမကိုညနေစာလိုက်ကြွေးရ၏။ ညစာစားပွဲဆိုတော့ စကားတွေဟိုပြောသည်ပြောပြောကြရင်းသား တို့ကျောင်းတက်ရသည့်အခြေအနေအကြောင်းစကားရောက်သွားသည်။ကျွန်မသားတွေကဒီနှစ်မှပြောင်းနေရသောကျောင်းအသစ်မှာအလွန်ပျော်ကြကြောင်း၊ ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စအားလုံး အဆင်ပြေပါ ကြောင်းပြောရင်းနေ့လည်ကရသောအီးမေလ်းအကြောင်းရယ်စရာမောစရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောပြလိုက်သည်။ကျွန်မ စကားဆုံးလျှင် ၀ိုင်း၍ရယ်မောကြမည်ဟုထင်ထားပေမယ့် သူတို့ကမရယ်ပါ။ ကျွန်မမှလွဲ၍၏၀ိုင်းထဲ မှာရှိနေသောလူအားလုံးပုံစံက အလန့်တကြားဟန်ပေါက်သွားသည်။ တစ်ယောက်ကဆို “Oh.my gosh!” ဆိုပြီး ဘုရား တောင်တ,လိုက်သေး၏။
“ အိုး.. အဲဒါသိပ်အရေးကြီးတယ်။ မင်းကလေးတွေရဲ့ ခေါင်းကို ကျောင်းကပြန်ရောက်ရောက်ခြင်းစစ် လိုက်သေးလား“
“ ကလေးကတဆင့် မင်းတို့ အစ်အိမ်သားလုံးကူးသွားလိမ့်မယ်။”
အကယ်၍များကလေးခေါင်းမှာသန်းတွေ့ ခဲ့လျှင်ကျောင်းကိုအကြောင်းကြားပြီး ကျောင်း၏ညွှန်ကြား ချက်များအတိုင်းလိုက်နာ၍ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုသဖွယ် မည်သို့ မည်ပုံနှိမ်နင်းရမည့်အကြောင်း သူတို့ပြော
တာတွေနားထောင်ရင်း ကျွန်မကြီးပြင်းခဲ့ရာရွာကလေးမှသန်းရှာ ပွဲတွေကိုပြန်မြင်ယောင်လာသည်။
ကျွန်မတို့ကြီးပြင်းခဲ့ရာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတောရွာများမှာတော့“ငါးပိနှင့်လောက်၊ရွှေနှင့်ကျောက်”ဆို ရိုးကအဆန်းမဟုတ်သလိုလူနှင့်သန်းဆိုတာကိုလည်းတွဲလျှက်မြင်ကြသည်ပင်။လူမှန်လျှင်သန်းရှိရမည်ဆိုတာ မျိုးတောင်တွေးကြသည်ထင်ပါရဲ့။ မြစ်ရိုးချောင်းရိုးတလျှောက်တည်ထားရသောရွာတွေမို့ရွာတန်းရှည်တွေက အများစုဖြစ်သည်။ ဟိုဖက်ထိပ်၊သည်ဖက်ထိပ် နာရီဝက်ခန့်လျှောက်ရသော ရွာတန်းရှည်တစ်ခုကိုဖြတ်သန်း မည်ဆိုလျှင်အနည်း ဆုံးသန်းရှာရင်းအတင်းပြောနေသူ အမျိုးသမီးသုံးလေးတွဲတော့တွေ့ရမည်ပင်။ အိမ်အ တက်အဆင်းလှေခါးထစ်တွေမှာထိုင်ရင်းသုံးယောက်တွဲကြီးသန်းရှာနေတာမျိုးလည်းမြင်ရနိုင်သည်။တချို့ကတော့အိမ်မကြီး၏ကြမ်းပြင်မှာ သင်ဖြူးဖျာခင်း၍အေးအေးလူလူလဲလျှောင်းကာ တဆင့်နိမ့်သောကြမ်းပြင်မှာ ထိုင်နေသောနောက်တစ်ယောက်ကသန်းရှာပေးတာကို စည်းစိမ်အပြည့်နှင့်ခံယူတတ်သည်။
တချို့ကတော့မိန်းမချင်းစကားထိုင်ပြောနေရင်းအနီးမှာကစားနေသည့်ကလေးတစ်ယောက်ကို “ဟဲ့.. လာစမ်း”ဟုလှမ်းခေါ်ပြီး ခေါင်းကဆံပင်များကိုဖြဲ၍ သန်းတွေ၊သန်းဥတွေကို တဖျောက်ဖျောက်မြည်အောင် တုတ်တော့သည်။ စပ်စုတတ်သောကလေး(အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးငယ်)တွေကတော့ သန်းရှာခံရင်းလူကြီး တွေအတင်းပြောတာနားထောင်ရခြင်းကိုကြိုက်ပုံရသည်။တချို့ကလေးတွေကတော့လူကြီးတွေကိုကြောက်၍ သာငြိမ်ခံနေရသည်။ မျက်နှာတွေကရှုံ့မဲ့နေကြသည်။ ချေးဝင်နေသောလက်သည်းမာမာများနှင့် ကလေး၏ဦး ခေါင်းခွံနုနုမှာကပ်နေသည့်သန်းကိုဖျစ်ကနဲအသံထွက်အောင်တုတ်သည်မဟုတ်လား။ ကလေးတွေခေါင်းက ဆီလည်းမရှိလေတော့ နေလောင်ဆံပင်နီကြောင်ကြောင်ဖွာခြောက်ခြောက်မှာကပ်နေသည့် သန်းဥကိုဆွဲယူ လျှင်အသည်းခိုက်အောင်လည်းနာသေးမဟုတ်လား။ ကလေးကမခံနိုင်ကြောင်းဟန်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တအီအီ အသံပေး၍ဖြစ်စေပြပေမယ့် သန်းရှာသူလက်မှလွတ်ဖို့ကတော့မလွယ်လှပါ။ သန်းရှာနေသူ ကထိုကလေး၏ မိခင်သို့ မဟုတ်အဒေါ် သို့ မဟုတ်လျှင်မျက်နှာရင်းသောအိမ်နီးခြင်းဖြစ်သည်လေ။
“ဒီကလေးကငြိမ်ငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ နင့်ခေါင်းထဲမှာသန်းမတွေရော၊သန်းပျတွေရော နည်းတာ မဟုတ်ဘူး”ဆိုပြီးဒေသိရဆဲဆိုနည်းတစ်ခုခုနှင့်တောင်အဆဲခံရဦးမည်။ ကျွန်မတို့ငယ်ငယ်ကလည်းခေါင်းမှာ သန်းရှိခဲ့ဖူးသည်ပဲ။စနေတနင်္ဂနွေကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုအမေကကျွန်မတို့မောင်နှမတတွေ၏ခေါင်းကိုဆပ်ပြာ နှင့်တစ်ထပ်၊သံပုရာသီးအရည်နှင့်အသားဖတ်တွေရောစပ်ထားသောတရော်ကင်ပွန်းခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်တစ်ထပ်လျှော်တော့သည်။ ဆပ်ပြာနှင့်လျှော်တာကသန်းသေစေဖို့ဖြစ်ပြီး သံပုရာသီးပါသောခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် လျှော်တာကဘောက်မရှိစေဖို့ဖြစ်သည်။ ခေါင်းကဆံပင်ရေမခြောက်တခြောက်မှာ ဘီးစိတ်နှင့်တိုက်ကာသန်း အမြစ်ပြတ်နှိမ်နင်းရေးလုပ်လေ့ရှိ၏။ အဲဒီလိုနေ့တွေမှာဆိုလျှင်ကျွန်မတို့ခေါင်းအရေပြားတွေမှာ ကြိမ်းစပ်နေ တော့သည်။အမေကမကြာခနထိုသို့သန်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်တတ်တာကြောင့်ကျွန်မတို့မောင်နှမခေါင်းတွေမှာသန်းရှိပေမယ့် တခြားသူတွေလောက်တော့မများပါ။
ရန်ကုန်တွင်ကျောင်းတက်ရသော အထက်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀မှာတော့ကျွန်မခေါင်း မှာသန်းမရှိတော့ပါ။ ထိုကာလများအတွင်းကျောင်းပိတ်ရက်ရှည်တွေဆို ကျွန်မကရွာမှာပြန်နေတတ်သည်။ ရွာမှာရှိနေစဉ်သူငယ်ချင်းဟောင်းများ အိမ်နီးချင်းများဆီသွားလည်လျှင် ငယ်ငယ်ကမြင်နေကျသန်းရှာပွဲတွေ တွေ့ ရသည်။ အိမ်နီးချင်းအမျိုးသမီးကြီးများနှင့်တချို့ ငယ်သူငယ်ချင်းများကပြောပြောဆိုဆိုနှင့်“ဟဲ့..လာစမ်း၊ နင့်ခေါင်းလည်းကြည့်ရအောင်”ဟုဆိုကာ ခေါင်းကိုလာကိုင်တတ်ကြသည်။ ကျွန်မက“ကျွန်မခေါင်းမှာသန်းမရှိ ဘူး” ဟုပြောမိသဖြင့် အဟားခံရတာလဲမကြာခဏပင်။ ‘သန်းမရှိဘူး၊ဟုတ်လား’ဟုဟာသတစ်ခုကြားရသလို အမေးခံရဖူးသည်။ ‘လူပဲဟာ၊သန်းမရှိပဲနေမလား’ဟု မဖြစ်နိုင်တာကိုကြီးကျယ်ရန်ကောဟူသည့်လေသံနှင့် အငေါ်တူးတာလဲခံရဖူးသေးသည်။ လူမှန်ရင်ခေါင်းမှာ သန်းရှိမှာပဲဆိုသည့်အဆိုကိုသက်သေပြချင်သဖြင့်ကျွန်မခေါင်းကို အငြိုးတကြီးမွှေနှောက်သန်းရှာကြတာ လည်းခံခဲ့ရသည်။ ဘယ်လိုမှရှာမတွေ့ကြချိန်မှာ“ ဘယ်လို ကောင်မလေးလဲမသိဘူး။ ခေါင်းမှာသန်းလဲမရှိ ဘူး။”ဟုငြိုငြိုငြင်ငြင်လက်လျော့ကောက်ချက်ချကြတာလည်းခံ ရဖူးသည်။
ရွာမှာရက်ရှည်ရှိနေစဉ်ကာလတစ်ခုမှာတော့ ကျွန်မခေါင်းမှာသန်းတွယ်တော့သည်။ ခေါင်းတွေကို တဖြင်းဖြင်းကုတ်ရ၊ဘီးစိတ်တိုက်ရနှင့်စိတ်ညစ်လာတော့အိမ်နီးချင်းငယ်သူငယ်ချင်းတွေဆီ ပြေးသွားမိသည်။
“ငါ့ခေါင်းမှာသန်းတွယ်နေပြီ၊ ရှာပေးကြစမ်းပါဟာ။” ဟုဆိုတော့ သူတို့ က၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြိုဆို ကြသည်။ ငါတို့ ပြောသားပဲ၊ လူမှန်ရင် သန်းရှိရမှာပေါ့ဆိုတာမျိုးခပ်ဆန်ဆန်တောင်အပြောခံလိုက်ရသေး၏။
ပြသနာက သန်းရှာခံရသည့်အရသာကို ကျွန်မကြိုက်သွားခြင်းပင်။ ခေါင်းပေါ်ကယားနေသည့်အရေ ပြားနေရာမှာကပ်နေသောသန်းဥကို ကြွမ်းကျင်သောသန်းရှာသူ၏ လက်သည်း မာမာနှင့်များတုတ်ပေးလိုက် ၍ အယားပြေသွားရသည့်အရသာ။ ဦးခေါင်းအရေပြားပေါ်မှာ တရွရွလှုပ်နေသောသန်းရှာသည့်လက်ကြောင့် ခေါင်းကိုငြင်ငြင်သာသာပွတ်သပ်ပေးနေသလိုဖြစ်ကာ မိန်းမောငိုက်မျဉ်းသွားရသောအရသာတွေကရှင်းပြရ တော်တော်ခက်သည်။
သန်းရှာချိန်က ရွာတွင်းသတင်းရေဒီယိုနားထောင်ရချိန်လည်းဖြစ်သည်။ ဟိုဖက်အပိုင်းကသန်းသန်းနု ညကခိုးရာလိုက်သွားတာသူ့ မိဘတွေကသိပေမယ့်ဘယ်သူခိုးသွားတာလဲမသိသေးသည့်အကြောင်း၊ရွာလည် ကမထွေး မနေ့ကစပြီးရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုံးဝတ်သည့်အကြောင်း၊ မထွေးကရွှေဆွဲကြိုးလုပ်နိုင်သည့်အခြေအနေ မဟုတ်သည့်အတွက် ထိုရွှေဆွဲကြိုးကမထွေးနှင့်ဘာလိုလိုဖြစ်နေသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းနာယက ဘဏ္ဌာရေး မှူးမုဆိုးဖိုဦးပေသီးလုပ်ပေးတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေအပါအ၀င်ငါးမွေးကန်တူးရန်မြိုနယ်မှပါမစ်ကျရေးအတွက် ချောင်းတွင်းနေအင်းသူဌေးများကရွာလူကြီးဦးအုန်းကိုငွေနှစ်သိန်းလာဘ်ထိုးကြောင်း၊ရွာလမ်းချဲ့ထွင်ရေးတာ ၀န်ယူထားသူရွာလူကြီးယောက်ဖကမနှစ်ကကောက်ထားသည့်လမ်းခင်းရန်အလှူငွေများကို စာရင်းရှင်းမပေး သည့်အကြောင်းအပါအ၀င် ရွာရေးရပ်ရေးလူမှုရေးတွေကိုပါအချိန်နှင့်တပြေးညီသိရသည်။ ကိုယ်ကစိတ်ဝင် စားလို့ကတော့‘ဟုတ်လား’‘အဲဒီတော့..’ဆိုတာမျိုးစကားထောက်ပေးရုံသာ။စကားမပြတ်လျှင်ဖြစ်စေ၊ခေါင်းမှာသန်းတွေသန်းဥတွေများနေလျှင်ဖြစ်စေ နောက်တနေ့ဘယ်အချိန်ထပ်ရှာကြမယ်ချိန်း နိုင်ကြသေးသည်။
နောက်တခါတွေ့ ကြချိန်မှာတော့ခေါင်းစဉ်သစ်တွေပေါ်လာပြန်သည်။ ရွာကထိန်ရက်ကိုနောက်ဆုတ် လိုက်သည့်အကြောင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ ရွာကထိန်မှာ ညည်းဘာဝတ်မလဲ။ ငါတို့ ဆင်တူချုပ်ကြမလား။ ရွာကြီးပိုင်းအလယ်စုကတော့တစ်အုပ်လုံးရေစိုဝမ်းဆက်ဆင်တူတွေချုပ်ကြမယ်ဆိုပဲ။ဒေါ်တင်အေးအလှူအလုပ်အကိုင်နေ့ကိုရော ညည်းလိုက်မှာလား။ အလှူကငါးခြောက်ထောင်းနဲ့ကြာဆံဟင်းလေးကြီးကျွေးမှာဆို တော့ငါတို့ငါးခြောက်ကိုင်တဲ့နေရာနဲ့ထောင်းတဲ့နေရာဝင်ကြမယ်အေ။ ကြက်သွန်ခွာရလှီးရတာမွှန်လွန်းလို့ ဆိုတာမျိုးတိုင်ပင်ဖြစ်ပြန်သည်။ရွာဦးစေတီဖြစ်မြောက်ရေးအလှူခံရက်တွေကိုလည်းခွဲတန်းချထားလေတော့တို့အုပ်စုကြာသပတေးနေ့ထွက်ရအောင်ဆိုတာမျိုး အဆင်ပြေရာနီးစပ်ရာလူခြင်းညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မိန်းမချင်း ပြောဖြစ်တာတွေထဲက အိမ်မှာရှိသည့်ယောင်္ကျားသားတွေကို ပြန်သတင်းပို့သင့်တာကိုပို့ကြသည်။ ဒီနှစ်ထမနဲ ပွဲမှာဒယ်နှစ်အိုးတိုးမှာ မို့နှဲမည့်ကာလသားထပ်စုထားဖို့ဆိုတာမျိုး၊ စုပေါင်းရှင်ပြုပွဲမှာမြစ်တဖက်ကမ်းရွာကဒိုး ပတ်ဝိုင်းကိုပါဖိတ်ခေါ်မည်ဆိုသည့်အကြောင်းတွေပေါ့။
သန်းရှာရင်းအချိန်ဖြုန်းတာများလာတော့အမေကျောင်းဆရာမကကြည့်မရတော့ပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက လိုသန်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်၍နှိမ်နင်းတော့သည်။ အမေ့စစ်ဆင်ရေးကြောင့် ကျွန်မခေါင်းမှာသန်းပါးသွားတော့ အမေကသူ့ စစ်ဆင်ရေးအောင်မြင်သည့်အတွက်တပြုံးပြုံးဖြစ်နေပေမယ့် ကျွန်မကတော့သိပ်မပျော်ချင်လှပါ။ “ နင့်ခေါင်းမှာသန်းသိပ်မရှိတော့သန်းရှာရတာပျင်းစရာကောင်းတယ်။“ ဟုဆိုကာသူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်မ ခေါင်းကိုမကိုင်ချင်တော့၍ဖြစ်သည်။ခေါင်းမှာသန်းရှားပါးသူတစ်ယောက်ကိုသန်းရှာသူတွေကလိုလိုလားလား သန်းရှာမပေးချင်ကြလေတော့ဇိမ်မယူရတော့သည့်အပြင် သူတို့ဝိုင်းထဲဝင်ဖို့အရည်အချင်းမမီသလိုလိုဘာလို လိုတောင်ဖြစ်သေးမဟုတ်လား။
သို့သော် မြို့ကျောင်းသူအဖြစ်ကျောင်းတက်နေရသော ကာလတွေမှာတော့ ခေါင်းမှာသန်းရှိခြင်းက မသင့်တော်သလို နေရာထိုင်ခင်းအရရော၊အခြေအနေအရပါ ကျွန်မခေါင်းမှာသန်းမရှိတော့ပြန်။ တခါတလေ ရွာပြန်လည်လျှင် မြိန်ရည်ရှက်ရည်သန်းတုတ်သန်းရှာနေကြသောအိမ်နီးနားခြင်းတွေ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို ကြည့်ကာသန်းရှာခံရသည့်အရသာကိုပြန်လိုချင်သလိုလိုဖြစ်လာသည်။ တခါတလေများသူများခေါင်းကသန်း တစ်ကောင်လောက်ဖမ်းပြီး ကိုယ့်ခေါင်းထဲထည့်လိုက်ချင်စိတ်များတောင်ပေါက်အောင်ပင်သန်းရှာခံချင်မိ၏။
မထိပ်တိုအိမ်ရှေ့ ပိတောက်ပင်ရိပ်အောက်ကွပ်ပျစ်တွင် ညနေစောင်းအလုပ်သိမ်းချိန်၌ ကျင်းပလေ့ရှိ သည့် ရပ်ကွက်အမျိုးသမီးစုဝေးပွဲမှာကိုယ်ကသန်းရှာသူမဟုတ်၊ သန်းအရှာခံသူ လည်းမဟုတ်ပဲပူးပေါင်းပါဝင် ဖို့ကနည်းနည်းအူကြောင်ကြောင်နိုင်သည်။ စကားပြောရင်းဆိုရင်းနှင့် ‘အဲ့ဒီနေရာလေးကို နာနာလေးတုတ် လိုက်စမ်းပါအစ်မရယ်။ယားလွန်းလို့'ဆိုတာမျိုးပြောလိုက်ရတာကိုကသန်းအရှာခံသူနှင့်သန်းရှာပေးသူအကြား မှာခင်မင်ရင်နှီးမှုတိုးပွားသွားပြီးတစ်ဦးအကျိုးတစ်ဦးသယ်ပိုးဖြည့်ဆည်းရင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုခိုင်မြဲသွားသလို ခံစားရစေသည်။ကျွန်မခေါင်းမှာသန်းတွေမရှိတော့သလို သန်းလဲမရှာတတ်လေတော့ထိုစုဝေးပွဲကို ဧည့်သည် တစ်ယောက်လိုတက်ခဲ့ရသည်။
ကျောင်းပြန်ဖွင့်၍မြို့ ကိုပြန်ရချိန်တွေမှာ ညနေစောင်းလျှင် ရွာရှိပိတောက်ပင်အောက်ကအမျိုးသမီး လွှတ်တော်ကိုသတိရမိတတ်သည်။ ရွာမှာဘာတွေဖြစ်နေလေသလဲ။ သူတို့ ဘာတွေများတိုင်ပင်နေကြလေ မလဲ။ အဲဒီကတဆင့်တက်တွေးမိတာကတော့ အကယ်၍များ ရွာကအမျိုးသမီးတွေ၏ခေါင်းတွေမှာသန်းမရှိ တော့လျှင်သူတို့၏စုဝေးချိန်ကဘယ်လိုပြောင်းသွားလေမလဲ။ အချင်းချင်းစည်းလုံးမှုခိုင်မြဲရေးအတွက် စည်းရုံး ရေးဆင်းခြင်းနှင့်သတင်းဖလှယ်ရေးအလုပ်ကို ဘယ်လုိုပုံစံနှင့်များပြောင်း၍ဆောင်ရွက်ကြလေမလဲ။ ရွာက အမျိုးသမီးတွေခေါင်းမှာသန်းတွေရှိတတ်တာကိုက သူ့ အရပ်နှင့်သူ့ ဇာတ်အတွက်လိုအပ် ချက်တစ်ခုလိုဖြစ် နေလေသလား။ အူကြောင်ကြောင်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မတကယ်ပင်ထိုသို့တွေးခဲ့မိလေသည်။
“ မင်းတို့ တိုင်းပြည်ကကျောင်းတွေမှာရောအဲဒီလိုမလုပ်ကြဘူးလား။”
ထမင်းစားပွဲဝိုင်းထဲမှတစ်ယောက်ကအဲဒီလိုမေးလိုက်တော့ ကျွန်မစိတ်ကလက်ရှိနေရာဆီပြန်ရောက် လာသည်။ ကျွန်မကသူ့ မေးခွန်းအတွက်တိုက်ရိုက်မဟုတ်သောအဖြေကို ဟာသဖောက်ပြီးပေးလိုက်သည်။
“ အကယ်၍ကျွန်မကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ဒေသကို ရှင်ရောက်သွားလို့ရှင့်ခေါင်းမှာသန်းမရှိဘူးလို့ ပြောရင် တချို့လူတွေက ၀ိုင်းရယ်ကောင်းရယ်ကြလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်ထိတချို့ဒေသတွေမှာ တစ်ယောက်ခေါင်းက သန်းကိုတစ်ယောက်ရှာပေးကြတာဟာ ကျေးလက်နေလူတွေရဲ့ ဓလေ့စရိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေသေးတယ်။”
“ ရှင်တို့ အခုရယ်ကြသလိုပဲ ဒီကအလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းက ကလေးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်
ခေါင်းမှာသန်းတွေ့ လို့ကျောင်းသားမိဘအားလုံးဆီအီးမေးလ်ပို့ ပြီး အိမ်နဲ့ကျောင်းပူးပေါင်းလို့သန်းကိစ္စကို စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအနေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ တပ်လှန့်တဲ့အကြောင်းကြားရင် သူတို့ကလည်းရယ်ကြလိမ့်မယ်။”
တကယ်တော့ကျွန်မကသူတို့ကို သန်းရှိခြင်းနဲ့သန်းရှာခြင်းအားဖြင့် ကျေးလက်နေလူထု (အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးထု) ထံတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့် စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရလာဘ်တွေကိုရှင်းပြချင်တာဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးထုစုဝေးသန်းရှာကြချိန်က လျှပ်စစ်ဓါတ်အားမလို၊ကွန်ပျူတာရှိဖို့ မလိုသည့် ရွာတွင်းအင်တာနက် ကိုအသုံးချချိန်ဖြစ်ကြောင်း။ ကြော်ငြာစရာမလို၊ခန်းမငှားစရာမလိုသည့် စုဝေးတိုင်ပင်စည်းရုံးချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊ အကယ်၍သူတို့ တတွေ၏ခေါင်းမှာ သန်းတွေမရှိလျှင်သူတို့ ၏ဘ၀ပုံစံနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်က တမျိုး တဖုံပြောင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းများပေါ့။
ဒါ့အပြင်သန်းကြောင့်ခေါင်းယားနေသူတစ်ယောက်၏ ယားနေသော နေရာမှာတွယ်ကပ်နေသည့်သန်း
ကိုသန်းရှာသူကတွေ့ ပြီး ခေါင်းထဲမှာပင်ဖျောက်ကနဲမြည်အောင် လက်သည်းနှင့်တုတ်ပေးလိုက်ချိန်၌ ခေါင်း ယားပြေသွားသူခံစားရသောအရသာနှင့် သန်းကိုတုတ်လိုက်ရသူခံစားရသော အရသာအကြောင်းတွေအပါ အ၀င်ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် မွေးကတည်းကမျက်စိမမြင်ရှာသူကို နေရောင်ခြည်အကြောင်းရှင်းပြသလိုဖြစ်နေမှာ ပဲဟုတွေးမိသဖြင့် ကျွန်မကရှင်းပြဖို့ မကြိုးစားတော့ပါ။ ကျွန်မက ဘယ်လိုစကားဆက်ရမလဲစဉ်းစားရင်းတွေ တွေဝေေ၀ဖြစ်နေချိန်မှာစားပွဲဝိုင်းအတွင်းရှိအမေရိကန်မိတ်ဆွေတစ်ဦးပြောလိုက်သောစကားကိုရောယောင် ရယ်မော၍ သန်းဇာတ်လမ်းကိုအဆုံးသတ်ခွင့်ရသွားတော့သည်။
“ မင်းတို့ ကျေးလက်နေလူထုရဲ့ ဓလေ့စရိုက်နဲ့ငါတို့ ဒီကလူတချို့ ရဲ့ ဓလေ့စရိုက်ကအတူတူပါပဲ။ မင်းတို့တွေက Lice ( သန်း) ၊ ငါတို့ တွေက Lies ( လိမ်ညာပြောတာ)လေ။”
Labels: Essay |
သန်းတွေကတဆင့် လူနေမှုဘ၀တွေထိ ရောက်သွားလိုက်တာ တပြုံးပြုံး နဲ့ ဖတ်သွားရတယ် အမ။
အမ ဘလော့ရေးနေတာ မသိလိုက်ပါလား။ ဟိုးနှစ်ကတည်းက templete လေးပြပြီး မလုပ်ဖြစ်ဘူး ထင်နေတာ။ ကောင်းတယ် အမရေ..။ ချိုသင်းလဲ လာဖတ်မယ်။
ထားတဲ့သဘောပါပဲချိုသင်းရယ်။ တခါတလေ ကိုယ့်ဝတ္တုအဟောင်းလေးတွေရှားရှားပါးပါး
ပြန်တွေ့ရင်လည်း တင်ဖြစ်တယ်။ စာရေးသူတယောက်ရဲ့ အခြားသောမျက်နှာစာလေးတခု